Anaphora, mumwe weanodikanwa ezvinyorwa zvinyorwa zvevananyanduri | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Literature, Nhetembo, dzakawanda
Mutsara naAndrés Eloy Blanco.
Anaphora chiumbirwo chimiro chinoshandiswa zvakanyanya pakati pevanyanduri uye vanyori venziyo. Inosanganisira kudzokororwa kweshoko kana chirevo, kazhinji pakutanga kwemavara kana chirevo. Kunyangwe, inogona kupedzisira yaonekwa pakati. Izvi zvinogona kuonekwa mumutsara unotevera naAmado Nervo: "Zvese zvinozivikanwa pano, hapana chakavanzika apa".
Iyo inoshandiswa kuitira kupa iwo iwo iwo chirevo chakajeka uye chisina kujeka, pamwe nezwi chairo.. Nenzira imwecheteyo, inoshandiswa pakuvaka nhetembo dzeprose, zvisinei nekuti zviri kudzokororwa kwemitsara chaiyo kana mapoka akafanana ezvekuita. Semuyenzaniso:
"Walker, hapana nzira, nzira yacho inogadzirwa nekufamba". (Chinyorwa chakanongedzwa naJoan Manuel Serrat, kubva munhetembo «Cantares» na Antonio Machado).
1 Zvekuda kutaura
2 Kwakatangira anaphora
3 Mhando dze grammatical anaphora
4 Anaphora uye cataphor
5 Ellipsis uye anaphora
6 Kazhinji hunhu hweanaphora sevanyengeri manhamba
6.2 Izwi rimwe, chirevo chimwe
6.3 Neshanduko yechikadzi
Pamusoro pekupa izvo zvinyorwa nehumwe mutinhimira nema sonorities, Icho chakakosha chirevo chekutaura kana uchijekesa pfungwa, zano kana chinhu chimwe chete chine rwiyo icho chiri protagonist yemamwe mavhesi. Chirevo chekuzvidira chinoenzanisirwa pazasi nechinyorwa naAndrés Eloy Blanco:
"Painter akaberekerwa munyika yangu aine bhurasho rekune dzimwe nyika // pendi anoteedzera nzira yevavapendi vekare vakawanda // kunyangwe Mhandara iri chena, penda ini vatumwa vatema." ("Paint ini vatumwa vatema diki", Andrés Eloy Blanco).
Pamusoro pezvo, anaphora anotamba chinzvimbo chinotungamira mukududzira. Nekudaro, inoita kuti nhetembo kuve kuratidzwa kwehunyanzvi - uko, kuti kukosheswe zvizere - kunoda kuverengerwa zvinonzwika. Kunyangwe ikaimbwa, kudzokororwa kana kudanidzirwa zvinonzwika. Hazvina kujeka kana muverengi ari pamberi pevateereri vanomuteerera zvakanyanya kana vari vega mukamuri.
Izwi rekuti anaphora rinobva mukubatanidzwa kwemazwi maviri echiGiriki mavambo. Chekutanga, Ana, ane chirevo "kudzokorora" kana "kufanana"; Kuwedzeredzwa ne pherein, zvinoreva kuti "kufamba". Pane rimwe divi, Ivo vanga varipo nguva refu kunyora kusati kwagadzirwa.
Quote naAntonio Machado.
Vadzidzi vanotaura kuti kushandiswa kweanaphoras kwakadzokera kunguva apo hunhu ndiyo yega nzira yekufambisa zivo. Naizvozvo, Ichi chishandiso chakashandiswa kusasiya chero nzvimbo yekusahadzika maererano nemifungo yakaratidzwa mumitsara kana inogona kududzirwa zvisizvo.
Mhando dze grammatical anaphora
Mukati mebazi remitauro uye ongororo yegirama, "anaphora" izwi rine zvirevo zvitatu zvakasiyana. Izvi - kunze kwekushandiswa kwadzo sechirevo - zvinoita chimwe chezvinhu zvakasarudzika zvinoita kuti Spanish ive mutauro wakaoma kuteedzera kune vasiri mutauro wavo. Kunyangwe, dzimwe nguva kune veSpanish-vatauri kubva pakuberekwa zvakare zvinoumba matambudziko.
Iyo anaphora inoshandiswa senzvimbo yekureva kana deictic muchimiro chechirevamwene, ine chirevo chakagadziriswa kune chirevo chekutaura. Cherekedza mumutsara unotevera naFilippo Neviani "Nek":… «Laura anopukunyuka kubva muhupenyu hwangu, uye imi muri pano, bvunzai kuti sei ndichimuda zvisinei nemaronda» ...
Saizvozvowo, anaphora inogona kunge iri dudziro ine dudziro inoenderana nemumwe mutsara unozadzisa kutaura.
Pakupedzisira, zvarinoreva zvinoenderana nemifungo iyo panguva yekudzokorora (yezwi kana chirevo) vatove varipo muchinyorwa. Semuenzaniso: "Kwanga kune shiri-yakakura shiri yakagara munyoro yemoni." (Albalucía Ángel).
Anaphora uye cataphor
Anaphora uye cataphor ndiwo mazwi ane zvirevo zvinowanzo kutsausa. Nekudaro, pane musiyano mumwe chete pakati pezviviri, izvo zviri nyore kunzwisisa. Kune rimwe divi, makaphaphasi anoshandiswa mukati megirama yechiCastilian senzvimbo dzekubatana kwechimiro muzvinyorwa, zvichidzivirira kudzokororwa kwemazwi.
Mune anaphora, chirevo chinoshandiswa mushure mokunge nyaya yacho yatove yakatariswa mukati memutsara. Asi, mune dimikira, "izwi rinotsiva" rinotanga kushandiswa uye kwozotevera protagonist yechiito ichionekwa.
Semuyenzaniso: "Ella haina kumirira kwenguva refu, ndizvo Patricia haana moyo murefu ”.
Ellipsis uye anaphora
Pane chechitatu che “gadziriro” chinoshandiswa kupa mubatanidzwa wezvinyorwa pasina kushandisa kudzokororwa kwamashoko nguva dzose. Zviri nezve ellipsis. Chirevo "chinotsiva" hachishandiswi pano. Nyaya yacho inongosiiwa, kusavapo kwake kunopembedzwa zvizere muchinyorwa uye hapana nyongano maererano nehunhu kana chinhu chaanotaurwa nezvacho.
Iko kusavapo (iyo ellipsis) kunogona kupihwa se "mhando" yeanaphora. Ndokunge, kusiiwa kunoitika kana nyaya yacho yatopihwa kare: Marina naRoberto vaviri vakasarudzika, vanodanana chaizvo. Nenzira imwecheteyo, inogona kushanda seye "chinyararire" dimikira. Tarira mumutsara unotevera: "Haana kuuya, Eduardo haana basa."
Kazhinji hunhu hweanaphora sevanyengeri manhamba
Kunyangwe padzimwe nguva zvitaurwa uye mitauro anaphoras zvingaratidzika zvakafanana, kuongorora mamwe eakajairika maitiro eakare kunoshanda kujekesa mutsauko uripo pakati peumwe neumwe.
Kuonekwa kwaro kunowanzoitika pakutanga kwemutsara wega wega. Kazhinji kubva pakuvhurwa kwemutongo uye zvichizotevera, zvichiteverwa nekuvharwa kwemutsara wega wega Naizvozvo, mune iyi nyaya anaphora inoonekwa mushure menguva uye ichiteverwa kana nguva uye yakaparadzana. Semuenzaniso: “Ucharopafadzwa iwe uri muguta kana mumaruwa. Zvibereko zvemukati mako uye nezvibereko zvevhu rako zvichakomborerwa ”. (Dhuteronomi 28).
Saizvozvowo, yekuisa anaphoras inogona kuwanikwa mushure mekoma kana semicolon. Izvi zvinoonekwa mundima inotevera: “Rova banga, chigayo, kusvikira gorosi rava nechando. // Ipa dombo, mvura, kusvikira raita nyoro. // Ipa hwindimiri, mhepo, kusvikira zvisingasvikike ”. (Miguel Hernandez).
Izwi rimwe, chirevo chimwe
Mune iyi mhando yeanaphora, eIyo sosi inovhara zvinopfuura izwi rimwe chete, sezvinogona kuonwa muchidimbu chinotevera naSilvio Rodríguez: “Vamwe vanhu vanoda rwiyo rworudo; kune avo vanoda rwiyo rwehukama; kune avo vanoda kudzokera kuzuva kuti vanoimba rusununguko rukuru ”.
Imwe yenzira idzo anaphora inogona kuwanikwa mukati memutsara ine polyptoton. Ipapo, izwi rinodzokororwa rinoshandura murume kana murume panguva yechinyorwa. Semuenzaniso: "Unoda kuti ndikude sei kana iye wandinoda kuti andide asingandide nenzira yandinoda kuti amude?"
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Anaphora
Inonakidza mitauro uye zvinyorwa zviwanikwa, asi iwe unofanirwa kuve nekuchenjerera nekushandisa kwayo, kuzviita kakawanda kunogona kusanganisa kuverenga kana kupa pfungwa yekuve wakawandisa mukuwanda. Yakanaka chinyorwa
Geralt weRivia Saga